Ikhaya lasekwindla ★Ummandla osembindini★ - I-Airbnb
Ikhaya lasekwindla ★Ummandla osembindini★
Indlu yayo enobunewunewu eyi-1200 yeenyawo zeenyawo kwindlu yosapho enokufikelela ngokuzimeleyo, eneendawo zokuhlala ezithandekayo kwigumbi lokuhlala. Inegumbi lokulala eli-1, i-pantry kunye negumbi lokuhlala elinetafile yokutyela. Iyilwe ngumculi uTarpan Patel, inobugcisa kwaye inobuhle, inezityalo, ubugcisa, izinto zakudala kunye nezinto zangaphakathi eziyilwe ngokuyilayo. Isithuba sinezinto zomzobi. Ibekwe embindini, umgama wokuhamba ukuya kwezona ndawo zokutyela zidumileyo kunye neebhari, kodwa ikwindawo enoxolo.
Akukho batyeleli bavunyelweyo ngenxa ye-Covid.
Izinto zabanikazi zikhona kwigumbi.
Ubumelwane bukhuseleke kakhulu. Ukuba kwindawo esembindini, uninzi lweendawo zokutyela ezidumileyo, iibhari, ii-pubs, iikhefi, ii-ATM, kwaye uninzi lweebhanki zikumgama wokuhamba okanye zifikeleleka ngokulula.
Konwabele ukutya okuziswe ekhaya xa ufowunelwa kwiindawo zokutyela ezininzi (ezikufutshane).
Indlu yibhlokhi kude nesitrato esikhulu, ke ngoko ukude kwindawo ephithizelayo, kodwa kwangaxeshanye uyonwabele iindawo ezikuyo.
Indawo esembindini eJaipur, yenza isiseko esifanelekileyo kwabo banqwenela ukuhamba kufutshane neJaipur. Iikhilomitha nje ezi-1.5 ukusuka kwisikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe. Iikhilomitha ezili-12 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwaye kufutshane neendawo eziphambili zomdla.
Kuphela i-10 imizuzu yohambo ukuya kwisixeko esipinki.
Izimvo eziyi-2 005